Izicatshulwa zothando tumblr Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Uthando aludingi kuqondwa, kufuneka luboniswe kuphela (uPaulo Coelho)
Apho kukho uthando, kukwakhona ubomi (Gandhi)
Uthando kunye nokuzimisela ngamaphiko ezenzo ezinkulu (Von Goethe)
Lowo owaziyo ukuthanda uhlala ephumelela (H. Hesse)
Soloko unyanzelisa ngentloko yakho, uthando lufuna ukholo.
Uthando licebo lomkhosi elinemvakalelo emva kwalo.
Vumela ukuba uqhutywe yimpambano yothando, kuya kuba nexesha lokucinga ngayo.
Cinga ngaphambi kokuba uthi hayi kuTHANDO.
Ukuthi hayi ukuthanda yeyona nto isisidenge.
Ibinzana okanye ingcinga yothando yenza ukuba usuku lwakho lube lolufanelekileyo.
1 Amabinzana othando eTumblr
2 Amabinzana okuqaqanjelwa yintliziyo kulutsha
3 Amabinzana amafutshane othando tumblr
4 Kutheni iTumblr lolona khetho lubalaseleyo ukubonisa uthando lwethu
5 Tumblr uthando ucaphula iividiyo
Amabinzana othando eTumblr
Andikuthandi ubomi bonke kodwa ubomi bonke.
Ndiyancuma ngathi ndisisidenge, kuba ndiyalukhumbula uncumo lwakho.
Ungoyena mzekelo mhle webali ebhalwe ebomini bam.
Ubutshintshile ubomi bam kwaye wayalathisa intliziyo yam.
ndiyakuthanda Kodwa akukubi kangako ... ngonaphakade
Uthando lokuqala alusoloko luza ngokulandelelana.
Ngamanye amaxesha uthando lobomi bakho luza emva kwephutha lobomi bakho.
Ndifuna ukukubona, umlomo wam unomhla kunye nawe.
Isiphoso sakho kuphela kukungavuki ecaleni kwam.
Bathi uthando luyaphila, kwaye ndiphila kuba ndikuthanda.
Xa uthando luyinyani lunesiphelo esonwabisayo.
Yintoni engaxabiswanga, kamva iyakhala.
Uthando lolona hlobo lugqibeleleyo lobudenge.
Ndikhetha ukujonga phambili, ebuyela umva ngokwaneleyo.
Amabinzana okuqaqanjelwa yintliziyo kulutsha
Impazamo ibingadibani nawe, kodwa ucinga ukuba wohlukile.
Akukho mntu ucinga ngawe njengam, nokuba awukhathali.
Ndiyathemba ukuba into oyikhangelayo ingcono kunale uyilahlekileyo.
Ungasokoli ngenxa yothando, uhlupheka sisidenge.
Ndithembise ukuba kwixa elizayo kuya kwahluka.
Apha, uphoswe lithuba lakho lokugqibela kunye nam.
Intliziyo yam ndiyitshixekile kwaye ndiye ndaginya isitshixo.
Kwakumnandi nje ukuba ndiyakholelwa.
Bathandane bathi ... yeyona nto intle kwihlabathi ... bathi.
Uthando alunakufa kwendalo.
Shiya ngezizathu kwaye ungabuyi nezizathu.
Kwintlungu yentliziyo sihlawula ixabiso lezinto ezithandwa kwangaphambili kunye nothando oludlulileyo.
Ngoku lixesha lokulibala.
Mhlawumbi into yethu ibikukwazana, hayi ukuba kunye.
Ingqwalaselo ayikaze icelwe.
Xa ukhala ngokuvalelisa kwethu khumbula ukuba andishiyanga, uye wandiyeka.
Into enzima kwaye ihlala ixesha elide ibhetele kunento elula neyethutyana.
Musa ukubeka i-ellipsis apho uthando luphelisa khona.
Ndiyabulela ukuphoxeka, ndiye ndafunda ukwahlula.
Enkosi ngokundivisa kabuhlungu, undenze ndomelela kakhulu.
Amabinzana amafutshane othando tumblr
Andiva amabhabhathane esiswini sam, kuba ngokwanga kwakho, ndiziva ngqo ukuba ndingabhabha.
Ezingalweni zakho ndiyazi ukuba akukho nto imbi inokwenzeka, inokuza el mundo phantsi, andinangxaki nokuba kunye nawe.
Abantu badinga uthando ukuze bakwazi ukuphefumla, ungazi, kodwa uthando lufana neoksijini.
Undenza ndizive ndingoyena mntu ukhaliphileyo emhlabeni, undenza ndizive ndinakho konke kwaye andifuni ukuyeka ukulwela yonke into endiyifunayo nendiyinqwenelayo.
Kusenokwenzeka ukuba andikakufundanga ukukuthanda njengoko kufanelekile, kodwa ndiyakuthembisa ukuba ukusukela ngoku ndiza kunikela ngalo lonke ixesha lam ukufezekisa, kuba yonke into ilungile ukuba izakuba sesibini ecaleni kwakho.
Iyahlekisa indlela ukuqaphela izandla zakho emzimbeni wam kundenza ndilibale ngayo yonke into embi ebomini.
Kutheni iTumblr lolona khetho lubalaseleyo ukubonisa uthando lwethu
Ngokuqinisekileyo Abafikisayo bafuna ukuphuma kwinethiwekhi yoluntu kwaye oku basebenzise ibinzana yonke imihla ukuze bonke abalandeli bajonge iimvakalelo abanazo malunga nabafana babo. Ukongeza, kwi-Tumblr singalayisha amabinzana amade othando ngamagama amahle amangalisa bonke abasebenzisi kwaye sibuyele emva kubhloga okanye sinike incasa kupapasho.
Tumblr uthando ucaphula iividiyo